Dalxiiska caalamiga ah ee yimaadda Afrika iyo Bariga Dhexe
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » | » Dalxiiska caalamiga ah ee yimaadda Afrika iyo Bariga Dhexe
| • Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Khubarada falanqaynta safarka waxay si dhow ula socdeen dabaylaha isbeddelka ee qaybta safarka tan iyo markii aafaddu sii daysay, ilaa dhowaan, xogta tigidhada hawadu waxay muujineysaa Ameerika, gaar ahaan Kariibiyaanka, inay yihiin kuwa kaliya ee beddela ciyaarta marka ay timaado waqtiga dhabta ah. soo kabashada safarka. Si kastaba ha noqotee, xogta safarka ee ugu dambeysay waxay muujineysaa in Afrika iyo Bariga Dhexe ay sidoo kale muujinayaan inay aad u adkeysanayaan.
Halka wadarta guud ee imaatinka caalamiga ah ee imanaya bisha Oktoobar 2021 ay ku fadhido -77%, Afrika iyo Bariga Dhexe tiradani waa -68%. Intaa waxaa dheer, waa Afrikada Saxaraha ka hooseeya tan muujinaysa waxqabadka ugu fiican ee sanad ilaa maanta.
Marka la eego imaatinka Sebtembar-Oktoobar, 71% dadka safarka ah ee imanaya gobolka waxay ka imanayeen meelaha ay u socdaan Bariga Dhexe. Halka Waqooyiga Afrika, Safarrada Saaxiibada & Qaraabada ay yihiin 46%, halka Saxaraha ka hooseeyana ay ka yihiin 33%. Bariga Dhexe waxa ay u tahay 18% oo kaliya, taas oo soo jeedinaysa in safarka halkan uu inta badan yahay wakhtiga firaaqada.
Intii lagu jiray masiibadaas, jinsiyadaha ugu sarreeya ee u socdaalaya gobolka waxay ahaayeen: Sacuudiyaan. Taas waxaa ku xigay Imaaraat iyo Qadar.
Marka la barbar dhigo dhiggooda gobollada kale saddexda waddan ee ugu sarreeya dhammaantood waxay lahaayeen heer tallaal oo aad u sarreeya, isku xirka duulimaadka, iyo xaaladaha safarka oo sahlan marka la barbardhigo, Koonfur Afrika, oo ay ku habsatay kiisas cusub oo Covid ah iyo sharciyo adag oo xirida.
Gelida Dubia, oo ah cayaaryahanka ugu weyn duulista iyo safarka dheer, xogta tigidhada hawadu waxay muujineysaa in tirooyinka imaatinka ee la ballansan ay hoos u dhaceen 64% laga bilaabo Noofambar 2021 - Abriil 2022, sida caadiga ah xilliga ugu sarreeya ee safarka nasashada ee caalamiga ah.
Dhanka kale, waxaa jiray kobac muuqda oo dhanka safarka ah ee Masar ilaa Dubia iyo tirooyinka safarka ee US On-The-Book (OTB) ayaa hoos u dhacay 13% kaliya marka loo eego wakhtiyadii hore ee masiibada. Sidoo kale, sanad ilaa maanta dhererka joogista ayaa labanlaabmay, laga bilaabo 7 maalmood ilaa 14 maalmood halkii ballanba.
Warka kale ee wanaagsan ee lagu ilaalinayo ayaa ah in safarka ganacsiga ee UAE uu ku socdo waddo wanaagsan oo soo kabashada, isagoo gaaraya 75% usbuuca bilaabmaya 21 Oktoobar marka la barbardhigo 2019, oo ay taageerayaan dhacdooyinka tooska ah sida Dubai Expo.
Wuxuu intaas ku daray: "Isla muddadaas safarka fasallada 'Premium cabin' safarka wuxuu kasbaday 7% saamiga suuqa marka la barbar dhigo 2019. Doobka iyo lammaanaha ayaa ah kuwa ugu safarka badan gobolkan. Ka dib furitaanka Dubai Expo bishii Oktoobar, safarka Imaaraadka ayaa kordhay wuxuuna kaliya 35% ka danbeeyay heerarka 2019 - arrimuhu waxay u socdaan jihada saxda ah ee Dubai iyo guud ahaan gobolka."